Andro iraisam-pirenena ho an'ny zaza afrikanina: manatevin-daharana fety amin'ny fety!
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Andro iraisam-pirenena ho an'ny zaza afrikanina: manatevin-daharana fety amin'ny fety!
Ny Birao Afrikana momba ny fizahantany maniry izao tontolo izao hiditra amin'ny antoko. Ny antoko dia miresaka ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny zaza afrikanina. Izy ity dia samy adihevitra matotra amin'ny mpitondra, fa miaraka amin'ny antoko miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy, Ankizy Afrikanina - ary amin'ity taona ity dia saika.
Manamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zaza afrikanina, ny Birao fizahantany afrikanina hiresaka momba ny olana atrehin'ireo ankizy afrikana sy ny drafitra ho avy hampivelarana ny fanabeazana ho an'ny ankizy atsy Afrika sy ny kolontsaina hitetezana ny fampianarana.
Mitondra sora-baventy mitondra ny lohateny hoe "Mikendry ny ankizy sy ny tanora amin'ny fampandrosoana ny fizahantany afrikanina" ny Birao Afrikanina momba ny fizahantany dia nandresy tamin'ny fampielezan-kevitra momba ny zon'ny fanabeazana ho an'ny ankizy atsy Afrika. Ny dinika virtoaly dia hatao rahampitso 16 jona amin'ny fanamarihana ny hetsika.
Sady fifanakalozan-kevitra no fankalazana ny hetsika. Izay te hiditra amin'ny saika dia afaka manao izany amin'ny alàlan'ny https://africantourismboard.com/international-day-of-the-african-child/ ary misoratra anarana.
Ny hetsika dia nokarakarain'ny fitarihan'i Abigail Olagbaye, ny masoivoho ATB any Nizeria. Abigail dia niasa tsy nisy tohiny nanambatra ity hetsika virtoaly manan-danja ity.
Ny filohan'ny filan-kevitry ny fizahantany afrikanina Atoa Cuthbert Ncube dia nilaza tao amin'ny hafany fa efa ho ny 60 isan-jaton'ny mponina ao Afrika no latsaky ny 25 taona, ka mahatonga an'i Afrika ho kaontinanta tanora indrindra manerantany momba ny vinavinam-pirenen'ny Firenena Mikambana.
Nilaza i Ncube fa ny tanoran'i Afrika no loharano lehibe indrindra ary tanora mitombo ny kaontinanta.
“Manome tombony lehibe ny mponina, saingy manodidina ny 14 isanjaton'ny herin'ny mpiasa no miatrika tsy fananan'asa. Tsy mety ho raharaham-barotra toy ny mahazatra ity ”, hoy i Ncube nanampy tao amin'ny hafany.
Nilaza ihany koa ny Lehiben'ny ATB fa fotoana mety izao hitsanganan'ny mpitondra afrikanina ho modely ary hahafehy ny kanton'ny famindrana fahalalana, fahaiza-manao ary ny kanto amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra sy safidy hendry.
“Ny toe-tsaina feno fahafaham-po dia tsy maintsy esorina amin'ny filan'ny nofo hanoratany ny fon'ny tanora, ny faniriana hiaina lehibe kokoa noho ny hanoanana sy ny faniriana ankehitriny. Misy rahampitso hipetrahana ary anio hanapahana hevitra ”, hoy i Ncube nanamarika.
Amin'ny 16 Jona isan-taona, mivondrona ny governemanta, ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana (ONG), ny fikambanana iraisam-pirenena ary ny mpiray antoka hafa hiady hevitra momba ny fanamby sy ny fotoana atrehin'ireo ankizy atsy Afrika amin'ny fahatsapana tanteraka ny zon'izy ireo.
Andro iray izay ahatsiarovan'i Afrika sy ny sisa an'izao tontolo izao ny famonoana zaza afrikanina an-jatony izay nifanandrify tamin'ny arabe tao Soweto, Afrika Atsimo, nitaky ny zon'ireo fanabeazana.
Nandeha an-dalambe tao Soweto ireo ankizy tamin'ny daty mitovy tamin'ny 1976, izay nifanaraka tamin'ny tsanganana iray mihoatra ny antsasaky ny iray kilaometatra ny halavany, nanohitra ny kalitaon'ny fianaran'izy ireo ary nitaky ny zon'izy ireo hampianarina amin'ny fiteniny.
Tovolahy mpianatra an-jatony no maty voatifitry ny polisin'ny governemanta apartheid teo aloha.
Miasa ihany koa ny ATB hisarika ny ankizy afrikanina handeha hamaky fitsangatsanganana fanabeazana ao amin'ny fireneny, avy eo mitsidika fanjakana afrikanina hafa ivelan'ny tanindrazany.
Amin'ny alàlan'ny fampidirana ny kolontsain'ny dia amin'ny alàlan'ny fanabeazana dia ho mpitarika tsara ho an'ny rahampitso ny ankizy afrikanina ary ho mpitarika amin'ny fizahantany amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola, fampiofanana ary fanaterana serivisy kalitao.
Ny famafazana ny masomboly fizahan-tany amin'ireo ankizy mianatra dia hamoa amin'ny fampandrosoana ny fizahan-tany any an-toerana, any amin'ny faritra afrikanina sy any afrika, ho an'ny kaontinanta mba hambinina amin'ny maha-lohalaharana mpizahatany eto an-tany azy, ny banky amin'ny loharanon-karena biby manan-karena, ny toerana manan-tantara sy ny lova ary ny kolontsaina manankarena eo amin'ny Afrikana. .
Ankoatra an'i Atoa Ncube, mpandahateny malaza hafa toa an'i Dr. Walter Mzembi, ny minisitry ny fizahan-tany Zimbaboeana teo aloha, Allan St. Ange, ny minisitry ny fizahan-tany Seychelles teo aloha.
Ny Biraon'ny fizahantany afrikanina, izay miorina any Afrika atsimo, dia mivarotra sy mampiroborobo an'i Afrika ho toeram-pizahan-tany ary toeram-pialan-tsasatra ho an'ny fivezivezena malalaka ataon'ny Afrikanina manerana ny kaontinanta, ary koa ny fanamorana ny fivezivezin'ny mpitsidika manerana ny firenena samihafa atsy Afrika.
Mandehana bebe kokoa momba ny Birao Afrikana momba ny fizahantany sy ny fomba hahatongavany ho mpikarakara ao amin'ny Organisation www.africantourismboard.com
Tsara Job Korea!
Fiaramanidina mpandeha roa no mifandona ao Russia